नेपालमा पनि सुरु भयो प्र,तिकेजी एक लाख” पर्ने तरकारी खेती ! - krishipost.com
नेपालमा पनि सुरु भयो प्र,तिकेजी एक लाख” पर्ने तरकारी खेती !
भारतको बिहार राज्यको औरंगाबादका एक जना किसानले एउटा यस्तो तरकारी खेती शुरु गरेका छन् जसको मूल्य अन्तरराष्टिय बजारमा १ लाख भारु प्रतिकिलो रहेको छ ।
भारतका एक जना आईएस अफिसरले बिहीवार सवैभन्दा मंहगो र अनौठो उक्त तरकारीको तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा ट्वीटरमा शेयर गरेपछि यसको यतिखेर सर्वत्र चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ ।
आईएस अफिसर सुप्रिया साहुका अनुसार यो खेती भारतीय किसानको लागि गेम चेन्जर सावित हुन सक्छ । कृषक अमरेश सिंहले काशीस्थित भारतीय सब्जी रिसर्च इष्टिच्यूटको कृषि विज्ञको रेखदेखमा यो खेतीको शुरुवात गरेका हुन् । उनले शुरुवाती रुपमा पाँच कट्ठा जग्गामा उक्त खेती गरेका छन् ।
होप सुट्सको प्रयोग गरेर बनाएको औषधीले क्षयरोगको उपचार हुने बताइएको छ । यसको अलावा यसको फूलबाट रक्सी पनि बनाउन सकिनेछ । त्यसैगरी यसको डाँठ तरकारीका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
यसको खासगरी यूरोपियन मुलुकमा अत्याधिक माग रहेको छ । जर्मनी,ब्रिटेन, आयरल्याण्ड, स्कटल्याण्ड लगायतका मुलुकका नागरिकले यसको तरकारी प्रयोग गर्न अत्याधिक रुचाउने गरेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले उल्लेख गरेका छन् । यो तरकारीमा एण्टिबायोटिक अत्याधिक मात्रामा पाइने बताइएको छ ।
यसको सेवन गर्नाले दाँतको दुखाई कम हुने तथा क्षयरोगको विरामीका लागि पनि लाभदायक हुने बताइएको छ । यसको प्रयोग तरकारी खान, काँचै खान, सलादको रुपमा प्रयोग गर्न तथा अचार बनाउन पनि सकिने बताइएको छ । एजेन्सीहरु